प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि चिनियाँ कम्पनीलाई घोक्रेठ्याक ! - Riddle Nepal
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि चिनियाँ कम्पनीलाई घोक्रेठ्याक !
By santosh On Jun 13, 2018
२५ जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घोषणालाई सरकारकै अर्को निकाय लगानी बोर्डले खण्डन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
तर, बजेट सार्वजनिक भएको ८ दिनपछि बुधबार लगानी बोर्डले यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने गरी कुनै निर्णय नभएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा अब के गर्ने भनेर अध्ययन अघि बढाएको थियो । अध्ययन समितिले रिपोर्ट तयार पारेर लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ ।
अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्डले पास गरेसँगै बल्ल यसको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, यो अध्ययन नसकिँदै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा पश्चिम सेती आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने घोषणा गरिदिए ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पेको थियो ।
तर, त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्‍यो ।
अहिले सरकारले पश्चिम सेतीका बारेमा पनि यस्तै विरोधाभाषपूर्ण निर्णय बाहिर ल्याएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले चिनियाँ कम्पनीलाई दोस्रोपटक धक्का लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच यो आयोजना थ्री गर्जेजँसगको सम्झौत्ाा तोडेर आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडेपछि यसका लागि लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै खतिवडाले सम्झौता नतोड्दै यो आयोजना आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिदिएपछि चिनियाँ लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गरेको हो ।
लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गर्न नसक्ने र यो आयोजना आन्तरिक स्रोतमार्फत नै निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि यो आयोजना निर्माणमा थ्री गर्जेजले कुनै चासो नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत ठेक्का तोड्न सहमत भएको स्रोत बताउँछ ।
कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न आतुर छन् । तर, उनीहरुले लगानीपूर्व नेपालमा नीतिगत स्थिरता खोजेका छन् ।
कार्की अगाडि भन्छन् ‘नयाँ सरकार बनेपछि पनि चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न ढुक्क भइसकेको स्थिति छैन । उनीहरु सरकारले गर्ने निर्णय सार्वभौमरुपमा गरेको हो होइन भन्ने द्विविधामा नै रहेको देखिन्छ । ‘
बाहृय लगानीका लागि चीन नै अहिले उपयुक्त विकल्प हुने कार्कीको दाबी छ । उनका अनुसार भारत आफैं नै स्रोतको अभावमा छ ।
युरोप तथा अमेरिका सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले भौगोलिकरुपमा निकट रहेका दुई छिमेकी राष्ट्रहरुमध्ये चीनका लगानीकर्ताहरु अहिले विश्वभर लगानी गर्ने स्थान खोज्दै हिँडेका छन् । त्यसैले चिनियाँ लगानीकर्तालाई चिढ्याउने खालका निर्णयहरु नेपालले गर्नु हुँदैन ।
त्यसैगरी इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्रयाटेजिक स्टडिजका निर्देशक भाष्कर कोइराला पनि सरकारको निर्णय ज्यादै अपरिपक्व रहेको बताउँछन् ।
एउटै सरकारबाट फरक-फरक निर्णय सार्वजनिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ यसले नेपालप्रति गलत सन्देश गएको उनको बुझाइ छ ।
गृहमन्त्री थापा भन्छन हप्ता माग्ने गुण्डाको विवरण दिनुस्